Dareen-cabsiyeed oo ka jira magaalada Kismaayo iyo duqaymo loo gaystay meelo ka mid ah gobolkaasi. – Radio Daljir
Dareen-cabsiyeed oo ka jira magaalada Kismaayo iyo duqaymo loo gaystay meelo ka mid ah gobolkaasi.
Nofeembar 8, 2011 12:00 b 0
Kismayo, Nov 08 ? Xaalad cabsiyeed oo aad u xooggan ayaa ka jirta magaalada Kismaayo ee xatunta gobolka Jubba hoose kaddib markii dhawrkii todobaad ee ugu dambeeyey la hadal-hayey suurtagalnimada guluf colaadeed oo ka dhan ah Al-shabaabta maamusho magaaladaasi.
Xaaladda baqdineed ee ka jirta magaalada Kismaayo ayaa timid kaddib markii la sheegay jiritaanka abaabul ciidan oo xoogleh taasoo ay waddo dawladda federaalka iyo xulufadeedii ku wehelisa dagaalladii horay uga dhacay meelo ka mid ah gobolladaasi Jubbooyinka, waxaana taas sii dheer duqaymo la la sheegay xalay in loo gaystay meelo ka mid duleedka magaalada Kismaayo.
Qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Kismaayo oo Radio Daljir khadka telefonka kula hadlay ayaa sheegay illaa xalay in ay maqlayeen daryanka madaafiic ka soo dhacaysay xagga badda kuwaasi oo birriga Kismaayo lagu soo ridayey gaar ahaanna meelaha ay ku yaalliin jasiirado yaryar ee gobolkaasi uu leeyahay, taassoo abuurtay xaalad cabsiyeed middii ugu sarraysay.
Mid ka mid ah waxgaradkaasi Kismaayo oo haatan ku sugan deegaanka Buulo Xaaji, kana gaabsaday in magaciisa la shaaciyo sababo amni awgeed ayaa sheegay magaalada Kismaayo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka shacabka ahi in ay iska cararayeen walwal laga qabo dagaalkaasi ka dhaca darteed.
Qofkaasi ka gaabsaday in magaciiska la xuso waxaa kaloo uu sheegay baqdinta ugu badni ee dhalisay qaxitaanka dadka in ay timid kaddib markii xalay maraakiib badda ku sugani ay duqeeyeen meelo Jasiirado ah oo gobolkaasi Jubbada hoose, inkastoo aan la ogayn cidda loola dan-lahaa iyo khasaaraha ay gaysteen toona.
Dawladda Puntland oo war-saxaafadeed ay soo saartay ku eedaysay Somaliland hurinta colaadda Ceerigaabo.